Asina Kudanwa Footage Festival Recap: Yakanakisa yeFest
musha	Varaidzo Nhau	Asina Kudanwa Footage Festival Recap: Yakanakisa yeFest
by Brianna Spieldenner March 29, 2022 296 maonero
The Unnamed Footage Festival iri kukurumidza kuita imwe yeandinofarira mafirimu emitambo: mushure megore rapfuura 24-awa yepamhepo livestream, mutambo wegore rino waitarisirwa nechido, uye hauna kuodza moyo. Ipo yakadzokera kunyika chaiyo mushure mekusimudza zvirambidzo zveCCIDID, izvo zvakashaya mukuratidzwa kwakanakisa kweiyo livestream uye akasiyana skits yaakaisa mukati mese, yakagadzira ne stellar lineup ye surreal, yekuyedza uye isinganzwisisike yakawanikwa tsoka uye POV anotyisa mafirimu. .
Sarudzo yegore rino idanho rakakura kubva gore rapfuura, uye iHorror yakafara kuvhara iyi firimu mutambo uye kuratidza mamwe emhando yepamusoro mafirimu atakaona. Saka neizvozvo, hezvino zvimwe zvezvakanakisa mune fest 2022. Unofanira kuzvitarisa kana/kana zvazogovaniswa.
Mafirimu Akanakisisa paMutambo Wemafirimu Usina Kutaurwa 2022
Chishongo chekorona paUFF yegore rino chaive The Outwaters, vhidhiyo yemimhanzi inotyisa muMojave Desert yakashata. Takamboongorora izvi kare, uye tinofunga kuti rinogona kunge riri iro bhaisikopo rinoshungurudza zvakanyanya gore rino. Chii chinosiyanisa iyi firimu inonakidza bhaisikopo uye kushandiswa kwekamera uye surreal, chirongwa chinotyisa.
Memory cards matatu anowanikwa mugwenga ane mavhidhiyo echikwata chinoenda kurenje kunotora vhidhiyo yemimhanzi. Vanotanga kusangana nezvinoshamisa mushure memazuva mashoma: denga rinoputika usiku, vanonzwa kuzunguzika uye kunzwa ruzha runoshamisa mumatombo. Kutevera izvi, chiitiko chinoshungurudza mupfungwa chinoitika icho chinoedza manzwiro ako. Nehurombo hapana zuva rekuburitswa kwefirimu iri.
Bolt Driver kwaive kushamisika kusingatarisirwi kwefirimu, asi kwete nekuda kwezvikonzero zvaungatarisira. Inoverenga senge yakawedzera Eric Andre Show-esque vhidhiyo diary ye incel mune yemazuva ano dhizaini yaMartin Scorcese's. tekisi Driver.
Zvinoita nharo? Ehe. Izvi hazvizove zvemunhu wese, kubva kune yakaderera bhajeti yekugadzira mafirimu maitiro (yakapfurwa zvachose pa iPhone) kune isina-PC nyaya yenyaya, vazhinji havangafarire iyi firimu. Asi kana izvo zviri zvinhu zvaunogona kubata nazvo, saka izvi zvinozoita lo-fi surreal masterpiece satire.
Iyo yega manifesto yeBolt Driver (an Uber-like freelancer) anoona zvakaoma kubatana nevamwe vakamupoteredza. Inowanikwa kuti utarise mahara (!) pa Boltdriver.la, saka chokwadi funga kuzvitarisa kana uine yakasara 42 maminetsi.
Wesens ifirimu risinganzwisisike, kunyangwe remifananidzo yakawanikwa. Iyi firimu ndeyehuzivi mune zvakasikwa, uye inopedza nguva yakawanda ichifunga nezvenzvimbo yedu mune zvakasikwa. Mamiriro ekunze anorota uye anokwezva, achiratidza imwe nyaya yakajairika muchiedza chakasiyana.
Gara muma1960, Wesens inoratidza vashandi vekhamera vachienda kune rimwe purazi rekuSouth Africa kuti vanoongorora chinhu chinoshamisa chakamhara ipapo chavanodavira kuti chingave chombo cheRussia kana kuti mutorwa.
Iyi firimu ine yakanaka cinematography, uye inotora mamiriro eiyo South Africa purazi rekurima nenzira ye ethereal. Iyi yaive yekutanga yeUS yefirimu, uye dhairekitori debut yaDerick Muller. Avo vanotsvaga isingawanzo manzwiro anowanikwa firimu rinotyisa richafadzwa neizvi.
Iyi firimu inobata kune avo vari kutsvaga rakagadzirwa zvakanaka, rinoshungurudza uye rine ropa rinowanikwa rinotyisa firimu. Chii chinonakidza Masking Chikumbaridzo ndezvekuti yakatorwa sevhidhiyo yeYouTube yehunyanzvi, ine rondedzero yenguva dzose kubva kune protagonist wedu sezvaanotsanangura kumisikidzwa kwake, makamera aachashandisa uye zvaanotarisira kuita. Kunyangwe ichitarisa zvakanyanya pamunhu mumwechete munzvimbo imwechete, iyi firimu inoshandisa zvakanyanya minimalism yayo uye iri kuita mukati mese. Isu takaongorora iyi firimu reFantastic Fest 2021, saka tarisa kuongorora kwedu kwakazara pano.
Mumwe protagonist asina kutaurwa zita anoferefeta zvakanangana netinnitus yake, kurira kusinganzwisisike kwaanonzwa nguva dzese. Anofunga kugadzira mavhidhiyo eYouTube kuti anyore maitiro ake, uye anotora nzira yesainzi mukuyedza kwake, aine chokwadi chekuti zvinhu zvakasiyana padyo naye zvinoshandura ruzha rwaanonzwa.
Kunyange zvazvo zvichitora nguva yaro kuti isvike kune zvinotyisa, kutanga kuchiri kunakidza nemaitiro ekugadzira mafirimu, rondedzero inomanikidzira uye chido chekuda kuona kuti murume uyu achatora zvakadii zvake. Magumo zvakare haaodze moyo, achienda akasviba zvakanyanya, anovhiringidza uye ane ropa. Tarisiro yekuzviparadzanisa nevamwe, kushushikana, kushushikana munharaunda uye kurangana kuchave kuyeuchidza COVID kugarwa.
Putrefixion: Vhidhiyo yaNina Temich
Iri ndiro firimu rekutanga rinoshandisa kamera ye360 degree. Zvakakodzera kurinda pachokwadi ichocho chete. The cinematography mufirimu iri, iyo neimwe nzira yakaderera-bhajeti, inoshamisa. Iyi firimu inoratidzira nharaunda yeMexico City uye inoshandisa kufamba kwemuviri kushandisa iyo 360 degree kamera. Nepo iyo nyaya isingamboenderane nehukuru hwebasa rekamera, ichi chichiri chimwe chakakosha kuti utarise kubva kuUnamed Footage Festival 2022.
Firimu iri rinotarisa pana Nina, anoridzwa nemodhi uye mutambi Dalia Xiuhcoatl semufananidzo wehupenyu hwake unosanganisira kusungwa kwekutamba kwake uye skating. Inotungamirwa naDavid Torres, zvichave zvinonakidza kuona kwaanoenda kubva pano seyakasarudzika maonero mune inotyisa genre.
Iyo Zand Order
Iyo Zand Order inogona kupfupikiswa sechikadzi Iyo Blair Witch Project, asi zvakawanda kune pfungwa. Hongu, vanhu vanorasika musango. Hongu, vanopopota zvikuru. Asi, pane zvakare zvinotonhorera Saw-sezvirahwe nemapikicha izvo boka rinofanira kufamba. Kubva kumukuru wenguva yekutanga Sarah Goras Peterson, bhaisikopo iri richave rinonakidza kune mafeni echinyakare akawanikwa mifananidzo uye zviitwa zvekunamata zvakakandwa mukati.
Bhaisikopo iri rinotevera Morgan, mudzimai anotenda kuti mwana wake akapambwa nesangano reZand Order. Anonyengerera vamwe vakadzi vashoma kuti vaende musango uye kuyedza kutsvaga mwanasikana wake nekapoka iyi, vachizvirekodha semhando yezvinyorwa kana humbowo hwemapurisa.
Ini ndoda kutanga iyi pfupiso ongororo ndichiti bhaisikopo iri harina kunaka, asi rine mutambo unonakidza wepamhepo wakavakirwa mukati uye unotyisa zviitiko izvo zvinokanganisa zvikamu zvisingashande zvakare.
Vhidhiyo mbiri dzeshamwari dzinofonerana muna 1999 kuti dzikurukure shamwari yepedyo, uye vozopedzisira votamba mutambo uyu usinganzwisisike, unopenga-uye-tinya unoita kuti vabvunze kuti mutambo uyu wakabva kupi ivo vachibuda kunze.
Kumwe kutevedzana kwakaita kuti ndidikitira nekusatya kwavakanga vaita, uye iyo yakapfava Flash game inotambwa nevaviri mufirimu iri inoshanda zvakanyanya mukutyisa kwairi, ndinoshuva kuti dai yakavandudzwa zvakanyanya. Magumo acho anga asingagutsikane uye kuita kwacho kwakanyanyisa matanda, asi zvikamu zvepakati zvinoita kuti zvive zvinotyisa. Kana bhaisikopo rakapfava raunoda kukutyisa ndiro rauri kutsvaga, ipa Deadware a try.
The Unnamed Footage Festival iri pedyo uye inodiwa kwatiri, saka funga kutarisa aya mafirimu anoshamisa. Vasina Kudanwa Footage Mutambo vachavewo nevhezheni yepamhepo yemutambo wavo wemufirimu muna Chivabvu 7 nemutsara wakasiyana wemafirimu. Ramba uinavo uye iHorror kuti uwane zvimwe.